Difaaca | Dhaqaalaha Dhaqaalaha
Casudi casals | | Crisis, Siyaasadda lacagta
Difaaca ayaa ka soo horjeedda wixii sicir barar noqon lahaa. Maqaalkani wuxuu isku dayi doonaa inuu sharxo waxa ku saabsan, sababta ay u jirto, faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka dib-u-dejinta. Lidi ku ah erey bixinteeda oo aan sifiican u naqaano, sicir bararka. Haddii sicir bararku uu noqdo koror guud ee qiimaha, leexin waa hoos u dhaca guud ee qiimaha. Si kastaba ha noqotee, muxuu qofku mar mar u dhacaa, marna mid kale, oo muxuu u dhacayaa tusaale ahaan waqtiyada casriga ah?
Ma jirtaa wado lagu helo xoogaa faa'iido ah? Runtu waxay tahay inay ku dhacdo munaasabado gaar ah, maahan dhacdo caadi ah mana badiyaa mustaqbalka rajo barwaaqo Dhaqaale ahaan. Badanaa waxay timaadaa marka sahaydu ka bataan baahida, taas oo ah, marka isticmaarku dhimanayo. Waxsoosaarkan xad-dhaafka ah ee alaabada ama alaabooyinka waxaa weheliya hoos u dhac guud oo xagga qiimaha ah, waana halka ay ka bilaabmayso qallafsigu, gaar ahaan haddii hoos u dhacani ku yimaado qaybo badan oo kala duwan.
1 Waa maxay falcelintu?
2 Tusaalooyinka dib u dhigista taariikhda oo dhan
3 Cawaaqibta dhaqaalaha Isbaanishka
Waa maxay falcelintu?
Dib-u-dejinta waxaa sidoo kale loo yaqaanaa sicir barar caan ah. Badanaa waxaa shuruud u ah siyaado siyaado ah in "ay qasbayso" inay hoos u dhigto qiimaha alaabada la iibsan karo. Kordhinta xad dhaafka ah waxaa shuruud looga dhigayaa awood la'aanta in alaabada lagala wareego dadka, ama dhiirigelin la'aan iyo / ama dhiirigelin si loo helo. Badanaa waxay la xiriirtaa dhibaatooyinka dhaqaale, tusaalooyinka wanaagsan ee tanina waxay noqon karaan Murugo Weyn oo soo jirtay intii lagu jiray 1930-yadii ama Dhibaatadii Maaliyadeed ee 2008. Xaaladahaas oo kale, shirkadaha, iyagoo doonaya inay ka takhalusaan wax soo saarkooda oo aysan ururin lacag dhigasho, waxay leeyihiin hab lagu joojiyo sicirka oo hoos loo dhigo si had iyo jeer u yaraadaan macaashkoodu.
Saamaynta ay bulshada ku yeelato badanaa waxay saameysaa qodobbada sida qaybsiga hantida iyo sinnaan la'aanta bulshada. Dhacdadan badanaa waxay ka timaaddaa xaqiiqda ah in deyn-bixiyeyaashu ay ka faa'iideystaan ​​wax ka badan deynta, kuwaas oo waajibaadkoodu ay tahay inay sii wadaan bixinta.
Sababaha, sidaan soo aragnay, badiyaa waa laba, saad xad dhaaf ah ama baahi la'aan. Waxay leedahay faa'iidooyin aad u yar, iyo xoogaa faa'iido darrooyin ah, oo aan hoos ku arki doonno.
Dhaqaaleyahanada iskuulka Austrian waxay ku doodayaan in dib u dhigistu ay leedahay saameyn togan. Faa'iidada kaliya ee hadda la helayaa waa taas maaddaama qiimaha hoos u dhacayo, awoodda wax iibsiga ee macaamiishu way sii kordheysaa, gaar ahaan tan kuwa haysta keyd. Si kastaba ha noqotee, fekerkan xagjirka ah wuxuu markiisa u maleynayaa in dib u dhigistu ay dhibaato ku tahay dhaqaalaha muddada gaaban.
Difaaca wuxuu ka kooban yahay taxane ballaaran oo saameyn taban ah oo xagga dhaqaalaha ah oo aan hoos ku arki doonno. Si kastaba ha noqotee, marka laga tago dhammaan xaqiiqooyinka iyo ifafaalaha ka dhasha, halista leexashada waxay ku jirtaa sahlanaanta ku soo dhaca goobaabka sharka leh iyo sida ay u adag tahay in laga baxo.
Dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha waa la dhimay.
Baahida ayaa yaraatay, ama sabab u ah sahay saa'id ah ama awood wax iibsi. Alaabooyin ka badan inta caafimaad ahaan lagama maarmaanka u noqon lahaa.
Yaraynta faa iidooyinka shirkadaha.
Waxay saameyn ku yeelaneysaa shaqo la'aanta markay dhamaato sii kordheysa.
Hubin la’aan dhaqaale ayaa gaadhay heer sare.
Abuur koror dulsaarka dhabta ah.
Waad arki kartaa sida ay u adagtahay in la joojiyo meertadan adag ee foosha xun. Haddii dalabku yaraado, oo xadku hoos u dhaco, shaqo la'aanta ayaa ku dambaysa sii kordheysa. Taa baddalkeeda, haddii shaqo la'aanta kor u kacdo, dalabku wuu sii dhici karaa waana hubaal inuu sii dhici doono.
Tusaalooyinka dib u dhigista taariikhda oo dhan
Waxaan soo aragnay sida dib udhaca uu ugu dhacay kadib dhibaatooyinkii adkaa ee soo maray 1930s iyo dhibaatada dhaqaale ee 2008. Si kastaba ha noqotee, iyo inkasta oo waxay noqotay arrin kali kali ah oo naadir ah qarnigii la soo dhaafay oo dhan waxaan ka heli karnaa tusaalayaal dalal ka soo rafaaday.
'Jabaaniisnimada' dhaqaalaha mararka qaarkood waxaa loo gudbiyaa si loo sharxo falcelinta ECB ee dulsaarka dulsaarka hoose iyadoo lagu dayanayo habdhaqanka Bangiga Dhexe ee Japan. Muddadan fadhiidnimada ah ee dulsaarka dulsaarka ah waxaa weheliyay dib-u-dejin bilaabmay 90-meeyadii illaa maantana socota. Hoos udhaca qiimaha isugeyntu waa horaba -25%.
Dhibaatada hadda jirta, muuqaalka dib-u-celinta ayaa si xoog leh u sii socota, tan iyo markii muuqaalkeedu horeyba looga baqay kahor. Intii lagu jiray sanadihii la soo dhaafay, dalalka horumaray ayaa hoos u dhigayay dulsaarkooda, waxaana awood u yeelanay inaan aragno dammaanad leh sicirro taban oo aad iyo aad iyo aad u badan, oo ah xaalad caadi ah oo hadda ka hor aan la malayn karin. Tusaale, sanad ka hor intaan dhibaatadan caafimaad ee halista ahi bilaabmin, Bishii Febraayo 2019, wadar ahaan 37 dal oo horumarsan ayaa mar hore hoos u dhigayay dulsaarkooda. Difaaciddu waa khatar dhab ah oo ay adag tahay in la xalliyo isla markaana dhiirigelinta ka hortagga ay tahay mid aad u xoog badan.
Cawaaqibta dhaqaalaha Isbaanishka
Diidmada kiiska Isbaanishka waxay leedahay xitaa saameyn xun oo xun. Xaqiiqdii, bishan Luulyo, CPI waxay ahayd -0% sidaas heerka isdhaafku wuxuu kusii jiri doonaa -0%, laakiin Ogosto waxay lasocotay koror ah 0% si loo dhigo heerka isdhaafsiga -1%. Cawaaqib noocee ah ayay diidmadu ku leedahay dhaqaalaha Isbaanishka? Hoosudhaca qiimaha muddada-dheer iyo baahsan ayaa laga yaabaa inay siiyaan awood wax iibsi oo ballaaran macaamiisha. Si kastaba ha noqotee, faa'iidooyinka faa'iidada ee shirkadaha ayaa la dhimay.
Haddii kharashaadka shaqaalaha la ilaaliyo oo shaqo la'aantu ay aad u weyn tahay, sida ka dhacda Spain, is biirsada walxaha qarxa waa mid aad khatar u ah, maaddaama ay yihiin laba ifafaalood oo is quudinaya. Dhinac marka laga eego, shirkadaha waxaa lagu qasbay inay yareeyaan faa'idooyinka faa'iidadooda si ay u sii ahaadaan kuwo tartamaya. Tani waxay ka hor istaageysaa inay gaaraan faa'iidooyinka ganacsi ee la doonayo, iyo sidoo kale inay lahaadaan xisaab ay ku sameeyaan maalgashi. Tani waxay u horseedi kartaa qaboojinta ama yareynta mushaharka shaqaalaha, Isticmaalka quusashada oo sii kordheysa xisaab la'aanta awgeed. Haddii tan lagu daro keyd la'aanta qoyskiiba, waxaa macquul ah in foosha xun ee isticmaalka gudaha ee dalka ay kasii darto. Iyadoo hoos u dhac ku yimid dhoofinta iyo kororka deynta dadweynaha ee xiisadda ka dib, muuqaalka dib-u-dejinta ayaa laga yaabaa inuu sannado badan oo bonanza ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » Crisis » Diidmada
Waxay leedahay wax badan oo ku saabsan waxa adduunka ka dhacaya iyo sida dhibaatadu weli u qarsoon tahay, gaar ahaan hadda, mawjaddan cusub ee infekshannada.
Jawaab si aad u cusbooneysiiso
Waa maxay bayaanka bangigu
Warqad talo bixin ah